Refund Policy - Iyo Kdom
Kutenda nekutenga paThe Kdom!
Nekuda kwekuda kwedu kukuru uye ne5-nyota mutengi kugutsikana huwandu, isu hatina zvachose kudzoka, kudzoserwa, kana kuchinjana pane zvigadzirwa zvedu.
In ZVAKAWANDA Nyaya, ZVESE ZVESE ZVINOPEDZISIRA
Anowanzo Bvunzwa Mubvunzo: Nei usingatenderi kudzosera mari, kudzoka, kana kuchinjana?
Chikonzero nei tisingatenderi kudzoserwa uye kudzoka imhaka yekuti zvinhu zvedu zvakaringana uye zvakajairwa zvinoenderana newe. Kana mutengi akasarudza kuti vari kuda kudzosa chinhu, hachisi chinhu chatingagone kudhinda uye nekudaro tinopedzisira tava marara akazara. Chimwe chinhu chatinotora mukati ndechekuti kazhinji vanhu vanoita kutenga online kuburikidza nekukurudzira. Kazhinji, vanozvidemba mushure memaawa mashoma ekutenga vobva vataura nemutengesi kuti vadzore mari sezvavakachinja pfungwa yavo nezvazvo. Isu takawona izvi seyakajairika maitiro evatengi uye ndosaka takasarudza kuti zvakanakisa kuti tibvise mutemo wekudzorera watakatanga.
Hatidi kuti ufunge nezve ichi sechinhu chakashata. Seboka, tichaita kushingaira kwedu kuita 100% yechokwadi kuti tiri kuita zvese zvatinogona kuti tikugutse iwe semutengi nechinhu chako chitsva chekutengesa.
Ndapota ita shuwa kuti urikudaira chinhu chakakodzera, saizi, uye ruvara. Ndapota ita shuwa kuti uverenge matanho angashande. Kana paine matambudziko zvachose uye kana iwe uchida rubatsiro, ndapota taura nesu pakarepo uye isu tichadzokera kwauri nekukurumidza sezvazvinogona.
Kuti tideredze njodzi yekuisa sizing nyaya, isu takapa saizi machati pane edu zvigadzirwa zvirevo mapeji e canvas shangu, suede bhutsu, sneakers, kutsvedza, toms chimiro, flip flops.
Chero zvichemo zvezvinhu zvisina kunyorwa / zvakakanganisika / zvakaremara zvinhu zvinofanirwa kuendeswa mukati memazuva makumi matatu mushure mekunge chigadzirwa chawanikwa. Pamapakeji akarasikirwa mukufambisa, zvirevo zvese hazvifanirwe kuendeswa kwete mushure memazuva makumi matatu mushure mekufungidzirwa kwekutumira. Zvikumbiro zvinoonekwa sekukanganisa pane yedu chikamu zvakafukidzwa nekubhadharwa kwedu.
Kana iwe ukaona chinetso pane zvigadzirwa kana chero chinhu pane iyo yekuraira, tapota titumire email pa support@thekdom.com
Kero yekudzoka yakaiswa nekukasira kufekitori yedu. Patinogashira kutumira chinodzoserwa, email yekuzvizivisa email inotumirwa kwauri. Vanodzoka vasina kubvumirwa vanopihwa rubatsiro kubva pamazuva makumi matatu. Kana fekitari yedu isingashandisirwe sekero yekudzoka, iwe unenge uine chikwereti kune chero kutumira kwakadzoka kwaunogamuchira.
Yakaipa Kero - Kana iwe ukapa kero inoonekwa seisina kukwana neiyo nhume, kutumira kuchadzoserwa kunzvimbo yedu. Iwe unozove nemhosva yemitengo yekuzorora kana tangosimbisa kero yakagadziriswa newe.
Isingadanwe - Zvikepe zvinoenda zvisingataurwe zvinodzoserwa kunzvimbo yedu uye iwe unozove nemutoro wekubhadhara mari yekuzorora kwauri.
Kudzoserwa neMutengi - Zvakanaka kuti ubate nesu usati wadzoka chero zvigadzirwa. Isu hatidzorere mirairo yekuzvidemba kwemutengi.
Kana tangogamuchira chinhu chako, tichachiongorora uye kukuzivisa iwe kuti tagamuchira yako yadzoka
chinhu. Isu tinobva takuzivisa iwe nezve chimiro chemari yako mushure mekutarisa chinhu.
Kana kudzoka kwako kukabvumidzwa, tinotanga isu kudzorera kubhadhi rako rechikwereti (kana yekutanga nzira yekubhadhara).
Iwe uchagamuchira chikwereti mukati meimwe huwandu hwemazuva, zvichienderana nemitemo yako yekupa kadhi.
Kudzorerwa kwemazuva mashoma kana kusina (kana zvichibvira)
Kana iwe usina kuwana mari yekuripazve, tanga uongorora chebhange rako zvakare.
Zvadaro taura nekambani yako kadhi rechikwereti, zvingatora nguva yakati kubhadhara mari yako isiri yepamutemo.
Next taura nebhengi rako. Panowanzove paine imwe yekugadzirisa nguva isati yadzorerwa mari.
Kana iwe waita zvese izvi uye uchigere kugamuchira yako mari yet, ndapota taura nesu
Iwe uchave nebasa rekubhadhara yako pachako mitengo yekutumira yekudzosera chinhu chako. Mari yekutumira haidzoreke.
Kana iwe ukagamuchira kudzoserwa, mutengo wekudzosera kutumira uchabviswa pamari yako.
Kana iwe uine chero mibvunzo pamusoro penzira yekudzosera chinhu chako kwatiri, taura nesu
Ndokumbirawo urege kuzeza kuti taura nesu Kana paine matambudziko zvachose kana kana iwe uchida chero mhando yekubatsira.